That's so good, right?: မုန်တိုင်းမှသည် လေပြေ
မည်းမည်းမှောင်နေသည့် ကောင်းကင်တိမ်ထုအောက် 'လမင်း' မှာ ပုန်းကွယ်နေဟန်တူပါရဲ့။ မှန်ပြတင်းတွေကတစ်ဆင့် မြင်နေ ရသည် က သစ်ပင်တွေရဲ့ ယိမ်းနွဲ့မှုခပ်ကြမ်းကြမ်းအောက်မှာ မိုးစက်တွေ ကဆုန်ပေါက်ကျဆင်းလာနေကြပြီ။ လျှပ်စစ်မီးတွေ အကုန်ပိတ် ဖယောင်းတိုင်လေးတစ်တိုင်ကို ဖန်အုပ်ဆောင်း အောက်မှာ ထွန်းထားရင်း ကုလားထိုင်ပေါ် အ၀တ်တစ်ထည် တင်ထားသလို မှီတွယ် နေသည့် ကျွန်တော့်မှာတော့ အထီး ကျန်။ ဘယ်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မှ မရှိကြပါဘူး။ ယိမ်းနွဲ့ နေတဲ့ ဖယောင်းတိုင်မီးတောက်လေးဟာ ကျွန်တော့်အမြင် မှာတော့ အပျိုမလေးတစ်ဦး ကနေသလို ဟိုသည် လွန့်လူး နေတာများပြတင်းက ရိုက်ခတ်နေသည့် မိုးစက်များရဲ့ အေး စက်မှုကို မေ့လျော့သွားမိသည်ပေါ့။
အပြင်မှာ လေမုန်တိုင်းများဝင်လာရော့သလား လေတိုက်နှုန်း အတော်ပြင်းထန်လာခဲ့သည်။ ပြတင်းတံခါးမှာ ချလိုက်မိသည့် လိုက်ကာကို အသာမကြည့်မိတော့ မိုးစက်များ မြေပြင်ကို အ ပြေးဆင်းတာများ ရေအိုင်များဖြစ်လို့။ နောက်ထပ်ကျသည့် မိုး စက်တွေခေါင်မိုးပေါ်ကျ လိုက်တာ တဖျောင်းဖျောင်းနှင့် ဒရမ် beat သံတွေလိုပါပဲ။ လေတွေ တိုက်ခတ်မှုကြောင့် သစ်ရွက် တွေရဲ့ လှုပ်ခတ်သံ၊ လေတွေရဲ့ တိုက် ခတ်သံဟာလည်း symphony of sound တစ်ခုပါပဲ။ အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်က သစ်ပင် တွေကို ကျွန်တော်ငေးမိပြန်တော့ သစ်ကိုင်းခြောက် တွေ ပြတ် ကျ၊ သစ်ရွက်တွေကြွေ ရေတွေအများအပြား မြေနိမ့်နေရာဆီ စီးဆင်းနေကြတယ်။
ဟော...ညမီးလေးတစ်ပွင့်ထွန်းထားခဲ့တာ အခုမှိတ်သွားပြီ။ လေပြင်းတိုက်ခတ်တာကြောင့် မီးဖြတ်ပစ်ဟန်တူပါရဲ့။ စိတ်ထဲ ခဏတော့ လှုပ်ရှားမိသွားတယ် အရာအားလုံးဟာ အမှောင် လေ။ အမှောင်ထဲမှာ အတန်ကြာနစ်မြုပ်နေမိပြီးနောက် ကျွန်တော့်လက်ကပတ်ထားတဲ့ နာရီကို တစ်ချက်ကြည့်မိတယ်။ ဒီတော့မှ အချိန်များစွာဟာ နှေးကွေးလေးလံနေခဲ့တယ်ဆိုတာ သိလိုက်ရတာ။
နံရံမှာကပ်ထားတဲ့ တယ်လီဖုန်းကို ကောက်ကိုင်ကာ နားမှာကပ် ကြည့်လိုက်တော့ dial tone လုံးဝမရှိ။ ကျွန်တော်ကမ္ဘာလောက ကြီး ကနေ အဆက်ဖြတ်ခံထားရပါပကော။ စိတ်ထဲတကယ်ကို ပဲ အထီးကျန်လာသလိုခံစားရတယ်။ ဒီလေပြင်းတွေကြား ပျောက်ဆုံးသွား နေရသလားပဲ။ သူ....သူ မုန်တိုင်းကြားထဲမှာ မိုးသည်းသည်းတွေထဲမှာများလား။ ကျောင်းကနေ အိမ်ကိုပြန်ဖို့ ကြိုးစားနေတုန်းထင်ပါ့။ ကျွန်တော်တို့ ကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ်နေကြ ပေမယ့် မနက်ခင်းတိုင်း ဖုန်းအဆက်အသွယ်ရှိကြသလို စကား စမြည်ပြောပြီး ကျွန်တော်က အလုပ်သွား၊ သူကကျောင်းသွား နေတတ်ခဲ့ကြတာပုံမှန်။ မနက် ဖုန်းဆက်တုန်းက သတင်းကြည့် နေစဉ်ဆိုတော့ ညလေပြင်းကျ မိုးရွာ မယ့်အကြောင်းသိရတော့ သူ့ကိုထီးယူသွားဖို့ ညကြရင်အိမ်ကိုလာခဲ့ဖို့ပြောလိုက်မိသေး တယ်။ ညစာအတူစားကြမယ်ဆိုပြီး ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်ပြင် ဆင်ချက်ပြုတ်ထားတာလေ။ ချက်ရပြုတ်ရတာ ကျွန်တော် ၀ါသနာပါတယ်ဗျ။ ကျွန်တော့်အချက်အြ့ပုတ်စွမ်းရည်က ငယ် ငယ်ကတည်းက အားပေးတဲ့ ပရိတ်သတ်ရြှိ့ပီးသား။ အိမ်ရှေ့ စဉ့်ဝင်အောက်ကို မြင်ရတဲ့ ပြတင်းနားက ထိုင်ခုံမှာသွားထိုင်ရင်း သူဘာ ကြောင့်နောက်ကျ နေရတာလည်း အခုသူဘယ်ဆီမှာ လည်း သိချင်မိတယ်။
အမှောင်ထဲထိုင်နေမိရင်း သူ့အတွက် စိုးရိမ်မှုတွေ ပိုမိသလို ဘာများဖြစ်နေမလည်းကြောက်လန့်လာမိရပေါ့။ သူနှင့် ဘယ် လိုမှဝေးလို့ မဖြစ်ဘူး။ သူနှင့်နီးစပ်ပေါင်းဖက်ခွင့်ရဖို့ ကျွန်တော် စွန့်စားခဲ့ရတာတွေက အများအပြား။ သူနှင့်သိပြီး လအနည်း ငယ်အတွင်းမှာပဲ ကျွန်တော့်ကိုယ်ပိုင်စိတ်ဆန္ဒတွေဟာ သူနှင့် သိခွင့်ခင်မင်ခွင့်...ဒီထက်ပိုရင်းနီးဖို့ ကြိုးစားမှုတွေနောက် ရောက်သွားခဲ့ရရော။
ကျွန်တော်က Hotel Career အတွက် ပြည်ပမှာ ခြောက်နှစ် လောက်ကုန်ဆုံးခဲ့တယ် အချိန်တွေ။ သူငယ်ချင်းများစွာရရှိခဲ့ သလို အတော် ပျော်ရွှင်ခဲ့ရပါတယ်။ မြန်မာပြည်ပြန်လာတော့ ဒက်ဒီ့ခရီးသွားမှုလုပ်ငန်း၊ဟိုတယ်လုပ်ငန်းတွေမှာ ၀င်အလုပ် လုပ်ခဲ့တာမှာ သူနဲ့ဆုံတွေ့ ဖို့ဖြစ်လာရတော့တာ။ 'ဟောင်ကောင်' ခရီးစဉ်အတွက် ကျွန်တော်စုံစမ်းချင်လို့ပါဆို တဲ့စကားသံနှင့်အတူ မြင်ခဲ့ရ၊ မကြာခဏ ခရီးသွား တတ်တဲ့ သူနှင့် ကျွန်တော်အချိန်တိုအတွင်း ရင်းနှီးသွားခဲ့တယ်။ စွမ်းအား ပြင်းစွာဖြင့်ချစ်ဖို့ဖြစ်လာတာ။
ကျွန်တော်သိနေပြီ အချိန်တိုအတွင်းမှာပဲ သူ့ကိုချစ်သွားခဲ့ပြီ ဆိုတာ။ ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်ရေဘ၀မှာ သူနဲ့နီးစပ်ခဲ့တာဟာ လူ့သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ထဲက အကောင်းဆုံးဥပမာတစ်ခုပါပဲ။ နွေးထွေးချိုသာအလိုက်သိတဲ့ သူ့ဆက်ဆံရေးတွေကြားမှာ ကျွန်တော်ဘယ်လောက် တောင် သက်သောင့်သက်သာ ဖြစ်သွားရမှန်း ဘ၀အမောတွေမေ့သွားမိမှ သိရှိခဲ့ရတာလေ။ နေပူထဲကပြန်အလာ လိမ္မော်ရည်အေးအေး လေးသောက်ရ သလိုပေါ့။
ကျွန်တော်တို့တစ်ယောက်အကြောင်း တစ်ယောက် ဂဃဏန သိဖို့လများစွာကြာမြင့်ခဲ့တာပါ။ သူလည်းသူ့ Master's Degree အတွက် လုပ်ဆောင်ရင်း၊ ကျွန်တော်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့စာတွေ့ တွေကို လက်တွေ့ဖော်ဆောင်ရင်း Hotel Life ကိုရယူနေမိရ ရင်းဖြတ်သန်းခဲ့ကြတာ လည်း ဒီအတော အတွင်းမှာပဲပေါ့။
ရင်းနှီးသွားဖို့ နီးကပ်သွားဖို့ ပထမတော့ သူချီတုံချတုံဖြစ်ဟန် တူရဲ့။ ကောင်းမွန်တဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတစ်ခုတည် ဆောက်ဖို့ သူရည် ရွယ်ရင်း တဖြည်းဖြည်းနှင့် ကာလကြာရှည် သူငြင်းဆန်ခဲ့တဲ့ lifestyle ထဲကျရောက်လာခဲ့တော့တာပါပဲ။ တစ်ခြားသောအမျိုးသားအတွက် ထူးခြားသော ခံစားမှုမျိုးသူ့ မှာရှိခဲ့တယ်ဆိုတာ မဆုံးဖြတ်ချင်နေဘူးလေ။ ကျွန်တော်တို့ဟာ အရာအားလုံးတော့ gay romance သဘော မျိုးမဖြစ်နေပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ သူငယ်ချင်း၊ soul mates ၊ပြီးတော့ ယုံကြည်ရ သောသူများ၊ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ ချစ်သူများတော့မဟုတ်ခဲ့ ကြပါဘူးလေ။
ကျွန်တော်တို့ချစ်နေကြတယ်....ဟုတ်တယ် ချစ်နေခဲ့ကြတုယ်။ တစ်ယောက်ရဲ့အလုပ်အကိုင်ကိုတစ်ယောက်နှစ်သက်သလို အလုပ်ရဲ့ဖြစ် ပျက်သမျှကိုလည်း မျှဝေခံစားဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ ဘ၀နေထိုင်ရှင်သန်မှုတွေကို နှစ်ဦးအတူရှိချိန်များမှာ မျှဝေဖြစ် ကြတာပါ။ ဒါပေမဲ့ နှစ်ဦးသား ရဲ့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် နေထိုင် တတ်တဲ့သဘာဝ၊ အတားအဆီးကိုမကြိုက်နှစ်သက်တတ်ခဲ့တဲ့ သဘောတွေကို ခိုင်မာတဲ့ ကတိတွေနှင့် တသီးတခြား အိမ်တွေ မှာနေကြရင်း ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး ကနဦးကလို ရှိမြဲအတိုင်း ရှိနေစေခဲ့ပြန်တယ်။
ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာ ဖွံ့ဖြိုးလာတော့ နှစ်ဦးသားစိတ် ၀ိညာဉ်တွေဟာလည်း နီးကပ်လာရကာ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး စိတ်ခံစားနှစ်သက်မှု ဟာလည်း ပိုလာပြီး နှစ်ဦးဘ၀အတူနေ ထိုင်ကြဖို့ မကြာခဏတွေးတောစတော့ပြုလာပါပြီ။ ရုပ်ရည် အသွင်အပြင်အပေါ်ဘယ်တုန်းကမျှ ဝေဖန်ကန့်သတ်မှုမျိုး မလုပ်မိခဲ့သလို နွေးထွေးတဲ့ ဆက်ဆံရေးထက်ပိုကောင်း တယ်လို့ မယူဆခဲ့ကြဘူးဆိုပါတော့။ အတူတူနေရရင် ပျော် တယ် ပျော်ပျော်နေတတ်ကြသူတွေ။ နှစ်ဦးကြား sex ကိစ္စ စိတ်ခံစားမှုရှိပေမဲ့ လက်တွေ့မဖော်ဆောင်ဖြစ်သေးပါဘူး။
ဘယ်အရာက၊ ဘယ်လို၊မင်းစိတ်မ၀င်စားခဲ့ဘူးပေါ့ ? သူဟာ စွဲမက်ဖို့အကောင်းဆုံး ရုပ်ရည်သန့်ပြန့်သူ၊တည်ငြိမ်သူ၊ ကြွက်သားတွေနှင့် တောင့်တောင့်တင်းတင်းဆိုတာ ကျွန်တော် အမြဲသိနေတယ် မျက်စိအမြင်အရ တွက်ချက်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ သူ့မျက်ဝန်းတွေဟာ အထူး ကိုကြည်လင်လှသလို သူ့အတွင်း စိတ်ကို ဖတ်လို့ရ၊ ဖောက်ထွင်းသိရှိရလောက်အောင်ပါပဲ။ ရုပ်ရည်အသွင်အပြင်မှာ တော်တော့ကို fit ဖြစ်ပါတယ်။ အရေ ပြားတွေဟာ ပန်းသွေးရောင်ထပြီး ချောမွတ်နေတာ။ နူးညံ့ချိုမြ တဲ့ အပြုံးဟာ ပါးချိုင့်လေးနှင့်အတူ ကျွန်တော့် နှလုံး အိမ်ထဲ နေ့စဉ်ခုန်ဝင်ပြီပေါ့။တွေ့ကြုံဖူးခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေနှင့်မတူ သူ့ကိုချစ်ဖို့တွေးတောမိခြင်းဟာ အကောင်းမွန်ဆုံး စိတ်ကူး ဆန္ဒပါ။
တွေ့ဆုံစဉ်ခဏ ကျွန်တော့်လက်တံတွေထဲသူ့ကိုထွေးဖက် ထားခြင်းဟာ နှစ်များစွာ အထီးကျန်ခဲ့တဲ့ ကာလအတွင်း တက် မက်မှု အပြည့်ဖြင့် ကျော်ဖြတ်ရမိခြင်းပေါ့။ ကျွန်တော် မျှော်လင့် ခဲ့တယ် ပထမဦးဆုံးတွေ့စဉ်က ကျွန်တော့်စိတ်တွေ ရိုးသားရ မယ်ပေါ့။ သူ့စိတ်ရဲ့ လွန်ဆွဲနေမှု ပြောရရင် သူဟာအမျိုးသား ဖြစ်သည့်အတွက် အမျိုးသားခြင်း စိတ်ဆန္ဒထူးထူးတွေ မရှိသင့် ဘူးလို့၊ အဲဒါကို ကျွန်တော်ထား ခဲ့ရတယ်လေ။ ဒါလေးကပဲလုံ လောက်ပါတယ် သူ့ကိုယ်သူပြန်လည်ရှာတွေ့ချိန်အထိ။ ပြီး တော့ အမှန်ကိုပြောပြရရင် သူ့အနားနီးစပ်ရ ခြင်းဟာ လျှပ်စစ် ဓာတ်နဲ့တို့မိသလို ရင်ခုန်လှုပ်ရှားမိရတာဟာ ကြုံတွေ့ဖူးတဲ့ sexual experience တွေလိုပါပဲ။
သူ့အကြောင်းအတွေးလေးတွေကြောင့် အမှောင်ထဲထိုင်နေမိ တဲ့ ကျွန်တော်သက်သောင့်သက်သာကိုဖြစ်လို့။ လျှပ်တစ်ပြက် လင်းသွား ချိန်မှာတော့ စိုးရိမ်မှုတွေမှပြန်နိုးထကြီးထွားလာရ ပြန်တယ်။ ကျွန်တော့်လက်ပတ်နာရီကို ကြည့်လိုက် ပြတင်း ပေါက်ကတစ်ဆင့် လှမ်း ကြည့်လိုက်အခါခါ။ မျှော်လင့်တာတွေ၊ စောင့်ဆိုင်းတာတွေ၊ မိုးပြင်းထဲ တစ်ယောက်ထဲဖြစ်နေမလား မသိတဲ့ ကျွန်တော့်မင်းသားလေးကို စိုးရိမ်စိတ်ဝင်နေမိတာတွေ ကို ဂတ်စ်မီးဖိုဖွင့်ကာ ဟင်းတွေကို ပြန်နွှေးရင်းဖုံးကွယ်ရပါ တယ်။ နာရီရဲ့မိနစ်လက်တံလေးတွေ တတစ်တစ်နဲ့ ရွေ့လျား နေမှုဟာ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲက ဟန်ဆောင်နေမှုကိုပြန်ပေါ်လာ စေပြန်ရဲ့။
ရုတ်တရက် မိုးမှောင်ကျနေတဲ့ အပြင်မှာမီးရောင်ကိုမြင်လိုက်ရ တယ်။ ခြံအကွေ့ကထောင့်ချိုးနားကမြင်လိုက်ရတာ။ ခဏထိုင်မိတဲ့ ကုလားထိုင်ကနေခုန်ထလိုက်ကာ ပြတင်းပေါက် ဆီတိုးကပ်သွားမိပေါ့ ကျွန်တော့်မင်းသားလေးများလားလို့။ ရင်းနှီးနေတဲ့ ကားမီး ရောင်ဟာ ခြံဝင်းထဲချိုးကွေ့ဝင်လာတာ ကြောင့် တံခါးမကြီးဆီပြေးသွားခါ သူဝင်လာနိုင်အောင်ကြိုဖွင့် ထားမိပါတယ်။
တံခါးမကြီးကိုဆွဲဖွင့်လိုက်တာ လေပြင်းတိုက်နေမှုကြောင့် အ တင်းဆွဲဖွင့်ရတယ်လေ။ မိုးပြင်းတွေလည်းရိုက်ခတ်နေတာ အများကြီးပဲ။ တံခါးမကနေထွက်ပြီး သူ့ကိုစောင့်ကြည့်မိတော့ သူ့ကျောင်းစာအုပ်တွေ ထည့်ထားတဲ့ အိတ်ရယ်၊ တစ်ခြားတိုလီ မိုလီထည့်တဲ့အိတ်တွေ သူ့ထိုင်ခုံနံဘေးမှာတွေ့ရတယ်။ မိုးစက် များထဲ သူ့မျက်နှာကိုကြည့်မိတော့ ကျွန်တော့်ကိုပြုံးပြီးကြည့် နေတာ..အိုး....ရှက်မိသွားရတယ်။ မိုးရေထဲခြေစလှမ်းကာ ကားဆီပြေးသွားရင်း ကားတံခါးကိုဖွင့်ဖို့လုပ်လိုက်တော့ သူ ကားတံခါးကိုဖွင့်အပြင်ထွက်လာရော။ စာအုပ် အိတ်ကို ကျွန်တော့်ဆီ ကမ်းလိုက်ရင်း ရယ်မောလေရဲ့။
ရှက်ပြုံးပြုံးမိရရင်း သူ့လက်တစ်ဖက်ကိုဆွဲကာ တံခါးကိုဖွင့် အတွင်းထဲဆွဲခေါ်မိတာရောင်ရမ်းပြီး။ တံခါးမကြီးကိုပိတ် လော့ခ် ချပြီးချိန်မှာ တော့ သူ့ဘက်ကိုလှည့်လိုက်ကာ 'အစ်ကို ညီ့ကို စိုးရိမ်နေခဲ့တာကွ ညီဘယ်နေရာသွားနေခဲ့တာလဲ မိုးထဲမှာ?'
သူ့ထုံးစံအတိုင်းပြုံးနေရင်း ကျွန်တော့်လက်က စာအုပ်အိတ်ကို လှမ်းယူလိုက်ကာ သူ့ဘေးကတစ်ခြားပစ္စည်းတွေနားချ ထား လိုက်ပါ တယ်။ သူ့လက်အစုံနှင့် ကျွန်တော့်လက်အစုံကို အုပ် မိုးကိုင်တွယ်လိုက်ရင်း အသံတိုးတိုးဖြင့် 'အိမ်ကိုပြန်လာဖို့အ တော်ကြိုးစားရတာဗျ၊၊ မြို့ထဲအနှံ့သစ်ပင်တွေလဲနေတာ ကား ကိုခက်ခက်ခဲခဲမောင်းလာခဲ့တာ နာရီအတော်ကြာသွားတယ်။ညီ OK ပါတယ် ' ဟုပြောပြီးကာမှ ကျွန်တော့်လက်တွေကို လွှတ် ပေးတော့တာ။
လေအေးတစ်ချက်အဝေ့မှာ နှစ်ဦးသားစိုရွှဲနေကြတယ်ဆိုတာ သတိရမိကြပြီး ရှူးဖိနပ်တွေကို ဖိနပ်စင်ဘက် ကန်ထုတ်ပစ် မိကြရင်း ဧည့် ခန်းထဲက ဖယောင်းတိုင်မီးရှိရာဆီလှမ်းလာ ဖြစ်ကြပါတယ်။ အိမ်ကြီးထဲမှာ နွေးထွေးမှုနဲ့အလင်းရောင် အနည်းငယ်ပေးနိုင်တယ်လို့ ထင် ရတဲ့ မီးတောက်လေးလေ။
'အင်း....မီးပျက်သွားတာသုံးလေးနာရီလောက်ရှိပြီ၊ မီးမှောင် မှောင်ထဲတစ်ယောက်တည်းထိုင်ရင်း ညီ့ကိုစိတ်ပူနေတာ'
သူအသံထွက်အောင်ရယ်မောရင်း ကျွန်တော့်အ၀တ်တွေကို လက်နှင့်ညွှန်ပြကာ 'Gosh, အစ်ကိုတော့သွားပြီ၊ အမှောင်ထဲ မှာဟုတ်လား တစ်ကိုယ်လုံးလဲစိုရွှဲနေတာ၊အအေးမမိခင် ဒီ အ၀တ်တွေချွတ်လဲပစ်တာက အစ်ကို့အတွက်ပိုကောင်းတယ်'
'ညီကောဘာထူးလည်း သော်ဇင်? အစ်ကိုစိုသလိုညီလည်းရွှဲ နေတာပဲလေ။ အစ်ကို့အခန်းကိုညီပြန်လိုက်ခဲ့၊ ရှာကြည့်မယ် ညီနဲ့သင့် တော်မယ့်အ၀တ်တွေ'
ဖယောင်းတိုင်မီးကို ကိုင်လျှက် ကျွန်တော့်အခန်းရှိရာအပေါ်ထပ် ကိုတက်တော့ နောက်ဖျားကနေ ထပ်ချက်မကွာလိုက်လာပါရဲ့။ မဲမဲ မှောင်မှောင်ထဲ ယိမ်းနွဲ့နေတဲ့ ဖယောင်းတိုင်မီးတောက် လေးအောက်မှာ ပျော်ရွှင်နေကြ၊ ရယ်မောနေကြတာဟာ အပြင် မှာကြောက် လန့်ဖို့ကောင်းတဲ့ လေပြင်းမုန်တိုင်း၊ ပြီးတော့ ရေစို နေတဲ့အ၀တ်တွေက အနှောင့်အယှက်မပေးနိုင်သလိုပါပဲ။ အလို လိုစိတ်ထဲ ရွှင်မြူး နေမိတော့တာလေ။
သူ့ကိုအ၀တ်စိုတွေချွတ်ပြီး ရေစိုဝတ်တွေထည့်တဲ့ခြင်းတောင်း ထဲထည့်ဖို့ပြောလိုက်တော့ သူ့ရှပ်အင်္ကျီ၊ကွာတားဘောင်းဘီ တို့ကို စတင် ဖယ်ရှားတော့တယ်။ ဘေးကိုစောင်းပြီးအဝေး ကိုကြည့်ပေးနေပေမယ့် မျက်စိထောင့်စွန်းကတော့ အ၀တ်တွေ မရှိစဖြစ်လာတဲ့ သူ့ကိုယ် ခန္ဓာကို တစ်စွန်းတစမြင်နေရတာ။ တဖြည်းဖြည်းအပေါ်မြှောက်ချွတ်လိုက်တဲ့ အင်္ကျီတွေကြောင့် သူ့လက်မောင်းကြွက်သားတွေကိုမြင်ရ သလို လျောချချွတ် လိုက်သော boxer ဘောင်းဘီကြောင့် ၀င်းမွတ်နေတဲ့ သူ့ပေါင် သားတွေနှင့်အတူ ချက်ကလေးကနေ ဆီးစပ်ထိ ပေါက် နေတဲ့ အမွှေးရေးရေးလေးတွေကို မမြင့်တမြင်ဖြစ်ရတာဟာ သူ့ခန္ဓာ ကိုယ်ရဲ့တက်မက်ဖွယ်ကောင်းမှုကို ပိုမိုကြည့်မြင်စေလိုစိတ် ဖြစ်စေသလိုပင်။
ရင်တွေတဆတ်ဆတ်ခုန်ကာ ဘီရိုထဲအ၀တ်တွေ အပြန်ပြန် အလှန်လှန်မွှေနေမိတယ် ရောင်ရမ်းပြီး။ အတွင်းခံတွေထည့်တဲ့ အံဆွဲရော၊ တီရှပ်တွေထည့်တဲ့အံဆွဲရော၊ ချိတ်နှင့်ချိတ်ထားတဲ့ ဘောင်းဘီရှည်တွေရောပေါ့။ သူကတော့မလှမ်းမကမ်းမှာ အသာငြိမ်ပြီး စောင့်နေ တာ တိတ်ဆိတ်စွာ။ ကျွန်တော်လုပ်သမျှ တွေကို မျက်စိအကြည့်တွေရွေ့နေတာတော့ ကျွန်တော်သိ တယ်။ သူနှင့်သင့်တော်တဲ့ တီရှပ် နှင့် ဘောင်းဘီတိုတစ်ထည် အဆင်သင့်သွားတာကြောင့် ဘီရိုကိုပိတ်လိုက်ပါတော့တယ်။
ကျွန်တော်ဘီရိုကိုပိတ် သူရပ်နေရာကိုလျှောက်လာတော့ ပထမ ဆုံးသတိပြုမိရတာကတော့ အ၀တ်ကိုလှမ်းယူတဲ့သူ့လက်တွေ တဆတ် ဆတ်တုန်နေတာကိုပေါ့။ ကျွန်တော့်အထင် ရေစိုအ ၀တ်တွေကြောင့်ရယ် အခုလေအေးအချို့တိုက်ခတ်နေမှုကြောင့် အေးမြနေတာကို ခံစားရလို့နေမှာ။ ရေချိုးခန်းထဲဝင်ပြီး တဘက် အကြီးတစ်ထည်ကိုဆွဲယူခဲ့ကာ ပြန်ဝင်လာချိန်မှာတော့ ခဏနေ ကရပ်ထားတဲ့နေရာမှာ တစ် လက်မမှရွေ့ကြမ်းပြင်ကိုခေါင်းငိုက် ဆိုက်ချကာနေဆဲ သူ့ကိုယ်တွေတုန်ခါဆဲ။ သူ့အတွက်ရွေးပေး ထားတဲ့အ၀တ်တွေဟာ ကြမ်းပြင်ပေါ် ကျနေတာ။ ယူလာတဲ့ တဘက်ကို သူ့ပခုံးတွေကတစ်ဆင့် တစ်ကိုယ်လုံးလွှမ်းခြုံပေး မိရရင်း ထွေးဖက်မိပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရင်ခွင်ထဲ သူ့ခမျာ တုန်ခါနေဆဲ။ ကျွန်တော်သူ့ကိုတစ်ကိုယ်လုံးခြောက်သွေ့ အောင်သုတ်ပေးပြီး ပြန်ခြုံပေးလိုက်ပါတယ် တဘက်ကို။ နွေးထွေးသွား မယ်ထင်ပါရဲ့။
သူ့ကိုတင်းကျပ်စွာထွေးဖက်ထားမိခဲ့တာဟာ လိုအပ်နေတဲ့ အနွေးဓာတ်အတွက်ပွေ့ဖက်ခဲ့ခြင်းသက်သက်သာလို့ ကျွန်တော်ယူဆ ပွေ့ ဖက်ခဲ့တာ။ ဒါပေမဲ့ သူ့လက်တွေဟာ ကျွန်တော့်ကျောပြင်တိုင်ရောက်ရှိလာကာ တင်းကျပ်စွာပြန် လည်ပွေ့ဖက်ပါရော။ ပွေ့ဖက်မိနေ တဲ့အချိန်ကာလ ခဏ တာမှာ အတန်ကြာရပ်တန့်နေမိကြတယ်။
ကျွန်တော် သူ့ကိုမလွှတ်ချင်တော့ဘူး။ သူ့အထိအတွေ့၊ ချီတုံ ချတုံဖြစ်မှုလေးတွေ၊ နွေးထွေးမှုနှင့် ချစ်ခင်နှစ်လိုမှုတွေ ပြီးတော့ ကျွန်တော့် ပခုံးပေါ်ကျရောက်နေတဲ့ သူ့အသက်ရှူငွေ့နွေးနွေး တို့ဟာ ကျွန်တော့်အတွင်းစိတ်ဝိညာဉ်အထိ နွေးထွေးပူရှိန်းစေ ပါရဲ့။ သူ့ရဲ့ပြန်လည် ထွေးဖက်တဲ့ လက်အစုံဟာ အကြင်နာ တွေဖြင့် ကျွန်တော့်ကျောပြင်တလျှောက် မရဲတရဲထွေးဖက် နေဟန်ပါ။ သူကျွန်တော့်လက်အစုံထဲ တုန်ခါနေတုန်း။
သူ့ကို အနည်းငယ်ဖယ်ခွာလိုက်ပြီး မျက်လုံးတွေကိုကြည့်မိ တော့ အအေးမိပြီးတုန်နေဟန်မတူ။ ဒီလိုထိတွေ့ပွေ့ဖက်နေ ရတာကိုပဲ ကြောက်ရွံ့နေရော့သလား? ကျွန်တော် သူ့မျက်လုံး တွေထဲစိုက်ကြည့်ပြုံးပြလိုက်ရင်း ဘာဖြစ်နေလဲ? ဘာမှား နေလို့လဲကွာ? အသံတိုးတိုး ဖြင့်မေးမိရပေမဲ့ ကျွန်တော့်ရင်ထဲ တက်မက်စိတ်တွေ ပြင်းပြနေပြီ သူ့အပေါ်။
'I'm not sure'
သူ့နှုတ်ဖျားက စကားထွက်လာဖို့ သူ့လက်မောင်းတွေကို ဖက် တွယ်ထားရင်းစောင့်ဆိုင်းရတာ သူ့စကားသံတွေ နှုတ်ခမ်းက တုန်ခါပြီး ထွက်လာတော့လည်း အများအပြားပါပဲ။ သူကား မောင်းလာစဉ်အတွင်းမှာ ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိနေချင်စိတ်ဖြစ် နေခဲ့တယ်။ လေမုန်တိုင်း တွေကျ မိုးတွေလည်းသည်းနေပေမဲ့ သစ်ပင်တွေလဲကျနေပေမဲ့ သူကြောက်ခဲ့တာတစ်ခုပဲရှိတယ် ကျွန်တော့်မျက်နှာကို မမြင်ရတော့ မှာကိုပဲ။
"အစ်ကိုပြုံးနေတာပျော်ရွှင်နေတာကို မြင်ချင်နေခဲ့တာ။ ညီဒီ နေရာရောက်တော့မှ၊ အခုလိုရပ်နေမိတော့မှ သေနိုင်တဲ့ အဖြစ်တွေတွေးမိပြီး ကြောက်လန့်စိတ်ဝင်နေမိတာဗျ"
ရင်ထဲဘယ်လိုနှစ်သိမ့်ကြည်နူးမိရသလည်းဆိုတာ ပြောပြ လို့မရပါဘူး။ ကျွန်တော့်ရင်ခွင်ထဲ သူ့တစ်ကိုယ်လုံးကိုဖက် တွယ်ထားမိတာ မှောင်မဲနေတဲ့ အခါကလာအတွင်းလေ။ များစွာသော ခဏတာအတွင်း သူ့ကိုနှစ်သိမ့်ကျေနပ်စေမယ့် စကားလုံးရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါရဲ့။ "ညီအခုပြောနေတဲ့စကားတွေကို အစ်ကိုနားထောင်နေရချိန်မှာ ညီ့ရဲကြောက်လန့်ခဲ့ရတာတွေ မရှိ တော့ဘူးလေ။ ဘာကြောင့်ဆို အစ်ကို ညီ့အနားမှာရှိနေပြီ၊ ပြီး တော့ ဒီလောကကြီးတစ်ခုလုံးထက် ညီ့ကိုပိုချစ်တယ်၊ အခု အစ်ကိုတို့ဘ၀တွေမှာနှောင့်ယှက်မဲ့သူတွေလည်းမရှိ ကြောက် လန့်တဲ့စိတ်တွေ အဝေးကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါတော့ကွာ" သူ့ကို နူးညံ့စွာစကားဆိုရင်း ထွေးဖက်လိုက်ပါရဲ့။
ကျွန်တော်တို့တွေ အဲဒီနေရာမှာ အဲဒီပုံစံအတိုင်းထွေးဖက်ရင်း အချိန်အတော်ကြာမရွှေ့မိကြပါ။ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ဖက်တွယ် ထားတဲ့ လက်အစုံထဲမှာ ရင်ချင်းအပ်လို့။သူ့စိတ်ထဲ က ထိန်းချုပ်ထားမှုတွေ၊ စိုးရိမ်မှုကြောင့်တုန်ခါနေတဲ့ သူ့ကိုယ် ခန္ဓာဟာ ကျွန်တော့် ရင်ခွင်ထဲငြိမ်သက်စပြုပြန်တော့ ကျွန်တော့် ကိုယ်ခန္ဓာဟာတောင့်တတစ်ခုကြောင့် ပူနွေးဆူပွက်လာပြန် ရော။ တစ်မျိုးတမည်ထင် သွား မလား ကျွန်တော့်အပေါ် သံယောဇဉ်လျော့သွားမလားတွေးကြောက်မိတာကြောင့် သူ့ ကိုလွှတ်လိုက်ပြီး ခုတင်ဘက်ဆီလှမ်းသွားမိပါ တယ်။ ခုတင် ပေါ်မှာ အသာငြိမ်ပြီးထိုင်ကာ သူအ၀တ်တွေဝတ်နေတာကို စောင့်ကြည့်ဖြစ်ရင်း။
အခန်းထဲမှာ စိုးရိမ်မှုတွေ၊ ဆန္ဒပြင်းပြမှုတွေ၊ စိတ်လှုပ်ရှား တက်ကြွမှုတွေဟာ လွင့်ပျံနေပါရော။ ကျွန်တော်ထိုင်နေရာ ခုတင်ဘက်သူဖြည်း ဖြည်းငြင်သာလှမ်းလာတယ်။ ကျွန်တော့် ဘေးမှာ အသာထိုင်တယ် ကျွန်တော့်ကိုလည်းမထိတွေ့ပဲလေ။ မနေနိုင်ပါဘူး နောက်ဆုံးတော့ သူ့ မျက်နှာလေးကိုလက် အစုံ ဖြင့် ကိုင်တွယ်လိုက်ရင်း "ညီ့ကိုအစ်ကိုချစ်တယ်၊အစ်ကို့ အသိ စိတ်ထဲမှာရော မသိစိတ်မှာရောပေါ့ တစ်ခြားသူ တွေကို ချစ်နိုင် တာထက်ပိုပါတယ်။ ညီ့ရဲ့ခံစားမှု၊ကြောက်လန့်မှုတွေကို အစ်ကို နားလည်ပါတယ်၊ အဲဒါတွေမဖြစ်စေရ ဘူးလို့ အစ်ကိုကတိပေး တယ်။ ညီနဲ့သိရတာ၊ ဆုံရတာ၊ချစ်ရတာတွေအားလုံးဟာ အစ်ကို့ရင်ထဲကလာတာတွေပါကွာ"
မီးရောင်မှိန်မှိန်အောက်မှာ ကြယ်နှစ်ပွင့်လိုတောက်ပနေတဲ့ သူ့ မျက်ဝန်းတွေဟာ ကျွန်တော့်ကိုစိုက်ကြည့်နေရင်း နူးညံ့လက် အစုံဟာ ကျွန်တော့်မေးဖျားကိုကိုင်လိုက်ကာ နှုတ်ခမ်းတွေကို ငြင်သာမှုအပြည့်ဖြင့်ထိတွေ့နမ်းရှိုက်ပါတော့တယ်။ 'ညီလည်းချစ်တယ်၊ ညီ့စိတ်တွေ အခုဘယ်လိုခံစားနေရမှန်း မသိဘူး။ ပထမတော့ ဒီဖီလင်ကိုမခံစားချင်ခဲ့ဘူး။ ဒါပေမဲ့ အခုတော့ စိတ်ဆန္ဒတွေ၊ လိင်စိတ်ခံယူချက်တွေ အား လုံးဟာ အစ်ကို့ကိုယုံကြည်စွာ၊ ချစ်ခင်မိတာတွေအောက်မှာ သေးငယ် ကုန်ပါပြီ။ ယောက်ျားတွေဆိုတာ သာမန်သဘောဖြစ်သွားရပါပြီ။ အခုအခြေအနေလေးကိုပဲ ညီချစ်တယ်။'
စေ့ပိတ်ထားသလို ကပ်နေတဲ့နှုတ်ခမ်းတံခါးကိုလက်လေးနဲ့ အသာဖယ်လိုက်ကာ အနမ်းလေပွေမွေ့နေတဲ့သူ့နှာခေါင်းလေး ကို ဖျစ်ညှစ် လိုက်မိတော့ သူ့ပါးပြင်မှာ ပါးချိုင့်တွေပေါ်အောင် ပြုံးရင်း သူမတ်တပ်ရပ်လိုက်ပါတော့တယ်။ သူ့လက်ဖျားတွေကို သူ့ဖာသာဆုပ်ကိုင် ရင်း ပါးပြင်တွေရဲနေအောင်ရှက်နေမှန်း ဖယောင်းတိုင်မီးရောင်အောက်မှာ ကျွန်တော်သိနေတယ်။ သူ့ boxer ကိုအသာချွတ် တီရှပ်တွေ ကိုဖယ်လိုက်ရင်း ကျွန်တော့် ဘေးမှာ အသာရပ်နေရဲ့။ ကျွန်တော်လည်း သူ့အလိုအတိုင်း boxer ဘောင်းဘီတွေဖယ်ရှားကာ သူ့လက် အ စုံကိုဆွဲကိုင် လိုက်ကာ ခုတင်ပေါ်အတူယှဉ်တွဲလှဲလျောင်းမိကြပါတော့တယ်။ ကျွန်တော်တို့ခေါင်းတွေဟာ ရေမြှုပ်ခေါင်းအုံးတွေကြား နစ် မြှုပ် နေသလို ခန္ဓာကိုယ်တွေဟာလည်း အမွှေးနုတွေလွှမ်းထား တဲ့ခြုံစောင်အောက်ပူးကပ်လို့ပါ။ ဘေးခြင်းယှဉ်လဲလျောင်းရင်း ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းများစွာ ဆီထိတွေ့ကြပါတယ်။ သူ့ နှုတ်ခမ်းတွေနမ်းမိစဉ်ခဏသွေးခုန်နှုန်းမြင့်ရသလို နူးညံ့တဲ့သူ့အသားအရေ တွေကို ထိ တွေ့ရတဲ့ ကျွန်တော့်တစ် ကိုယ်လုံးလျှပ်စစ်နဲ့တို့ခံရသလိုတုန်ခါနေတာ။
တင်းရင်းနေတဲ့ သူ့ပေါင်တံတွေကတစ်ဆင့် သူ့ပေါင်ကြားဆီ ရွေ့ပြီး မာထောင်နေတဲ့သူ့ညီဘွားကို ညင်သာစွာကိုင်တွယ် လိုက်တာ ပူနွေး ပြီးသွေးတွေတဆတ်ဆတ် တိုးနေတာကိုခံစား ရပါတယ်။ နူးညံ့စွာ၊ နှစ်လိုချစ်ခင်စွာဖြင့် ကိုင်တွယ်ကာဖြည်း ဖြည်းလက်ကစား ဖြစ်တာမှာ ကျွန်တော့်ရင်ထဲ အကြိမ်များစွာ တောင့်တစိတ်ကူးယဉ်ခဲ့ရတဲ့အရာတစ်ခုကို လုပ်နေရသလိုပါပဲ။ သူ့မျက်လုံးတွေကိုမှိတ်ကာ လှဲလျောင်း နေရင်း အသာငြိမ်နေ တယ်။ သူ့လှုပ်ရှားမှုတွေကို စောင့်ကြည့်နေတဲ့ ကျွန်တော် သူ ငြင်းဆန်မှုမရှိမှန်းသိရတော့ ဆက်ပြီး လှုပ်ရှားမိရ သည်ပေါ့။
သူ့လက်တွေဟာလည်း ကျွန်တော့်ငပဲကိုအသာလှမ်းကိုင် တယ်။ ကျွန်တော့်လက်ချောင်းလေးနှင့် သူ့ကွမ်းသီးခေါင်း ထိပ်ကို အသာပွတ် သပ်မိတော့ အရည်ကြည်လေးထွက်စပြု နေပြီ။ ဒါပေမဲ့ သူဘာဖြစ်သွားသည်မသိ ကျွန်တော့်လက်အစုံကို ကိုင်တွယ်ပြီး တစ်ကိုယ်လုံးကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ထဖက်ပါ တော့တယ်။ ကြောက်လန့်မှုတွေ၊ တွေးတောမှုတွေက လွန် မြောက်ပြီထင်ရဲ့လေ။
အတန်ကြာ ခုတင်ပေါ်နှစ်ဦးသား လှုပ်ရှားမှုမရှိငြိမ်သက်သွား မိကြတယ်။ သူ့ရင်ဘတ်က မွှေးညင်းနုလေးတွေ၊ ချောမွေ့တဲ့ လက်မောင်း သားလေးတွေကိုတော့ ကျွန်တော်ပွတ်သပ်နေ မိတာပေါ့။ ဖက်တွယ်ထားတဲ့ လက်အစုံကြောင့် ထိကပ်နေတဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာပူနွေးမှုက ကျွန်တော့်စိတ်တွေကို တက်မက်မှု အရှိန် မြှင့်ပေးနေလေတော့ သူ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အတိုင်းအတာ လက်မ တိုင်းဟာ ကျွန်တော့် အနမ်းတွေ နှင့်ပြည့်ကရော။
သူ့ကိုဖက်တွယ်ထားတဲ့လက်အစုံရဲ့လှုပ်ရှားမှုကို ရုတ်တရက် ရပ်တန့်လိုက်ကာ သူ့ကိုခေါင်းအုံးဆီသို့အသာလှဲလျောင်းစေ လိုက်တယ်။ ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းတွေဟာ နူးညံ့တဲ့သူ့နှုတ်ခမ်း အစုံမှဖွဖွငြင်သာ ရွှေ့ဖယ်ကာ ရင်အုံမို့မို့ကတစ်ဆင့်.....မွှေး ည္ဓင်းနုလေးတွေတလျှောက် စီးဆင်းသွားရာ ဆီးစပ်လေး အထိ ပါသလို ကျွန်တော့်လျှာဖျားလေးဟာလည်း သှူု့နို့သီးခေါင်းလေး တွေကို ရစ်ကာဝိုက်ကာဖြင့် ချက် ပေါက်ကလေးပါမကျန် ကလိ ဖြစ်တော့ သူ့ခမျာ ပါးစပ်က ခပ်တိုးတိုးအသံလေးတွေထွက် လာသလို ကြက်သီးမြမြပင်ထနေသေးတော့ တယ်။
သူ့လက်တွေဟာ ကျွန်တော့်ဦးခေါင်းကို အောက်ပိုင်းဆီ မသိ မသာတွန်းပို့နေသလိုပါပဲ။ ကျွန်တော့်လှုပ်ရှားမှုတွေ ခဏ ရပ်တန့်လိုက်ကာ သူ့မျက်ဝန်းရီဝေေ၀တွေ ပြီးတော့ သူ့ boxer ဘောင်းဘီကိုကြည့်လိုက်တော့ ထိုးထိုးထောင်ထောင်နဲ့ တစ်စုံ တရာကို ငံ့လင့်နေပါပြီ။ ခါးကမျော့ကြိုးကို အသာလျစ် ခေါင်း ထောင်ထလာတဲ့ ဒုံးပျံထိပ်ဖူးလေးကို ဖွဖွအနမ်းဦးပေးရတာပေါ့။ နောက် ကွမ်းသီးခေါင်းလေးကို အသာငုံလိုက်ကာ အသာ အယာပဲလှုပ်ရှားတယ်။ ထိပ်ပိုင်းကနေ အဆုံးထိဖြည်းဖြည်း သွင်းလိုက်ထုတ်လိုက် လုပ်ဖြစ်တယ်။ သူ့လက် ချောင်းတွေက တော့ ကျွန်တော့်ဆံနွယ်တွေကို အသာအယာတိုးဖွနေပါရဲ့။
မိနစ်အနည်းငယ်ကြာတော့ သူ့ကွမ်းသီးခေါင်းကို ခပ်မြှင်းမြှင်း စုပ်ရာကနေ အားရပါးရပြုစုပါတော့တယ်။ ပါးစပ်ထဲမှာ လျှာနဲ့ ကစားရင်း အထုတ်အသွင်းအစုပ်အမျိုလုပ်တာ အာခေါင်ထဲထိ ရောက်ရောက်သွားရသေး။ ခပ်သွက်သွက်ပြုလုပ်မိစဉ်ခဏ သူ့ ခြေဖျားတွေ တွန့် ခေါက်လာကာ အသက်ရှူသံပြင်းပြလာပြီး သူ့လက်ချောင်းတွေဟာလည်း ကျွန်တော့်ဆံနွယ်တွေကို ဆွဲ ကိုင်ပါရော။ ဒါကြောင့် သူ့ငပဲ တစ်ချောင်း လုံးအဆုံးထိသွင်း လိုက်ကာ ပြန်ဆွဲထုတ်ပေးလိုက်မိတော့ အနည်းငယ်တုန်ခါ သွားတဲ့ သူ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အပြိုင် ကျွန်တော့်ရင် ဘတ်တွေ ပါးပြင် တွေမှာ ပူနွေးချွဲပစ်တဲ့ အရည်တွေဟာ တွဲလွဲခိုသွားရတာပေါ့။
အသက်ကိုပုံမှန်ရှူရင်း ခေါင်းအုံးပေါ်သူပြန်အိပ်မှီသွားချိန်မှာ တော့ သူ့ရင်အုပ်တွေပေါ် ပေကျံနေသေးတဲ့ အရည်ပျစ် တစ်ချို့ ကို အ၀တ် တစ်ခုဖြင့် သုတ်သင်ဖယ်ရှားပေးဖြစ်ပါတယ်။ ပြီး တော့ ကျွန်တော့်မျက်နှာပေါ်က အရာတွေကိုလည်း အ၀တ် ဖြင့်သုတ်သင်ပြီး ရွှေမျက်နှာ ကိုမော်ဖူးလိုက်တော့ ကျေနပ်နှစ်သိမ့်မှုအပြည့်ဖြင့် မျက်ဝန်းတွေမှေးမှိတ်အနားယူနေပါရဲ့။
ကျွန်တော်လည်း သူ့လို climax ဖြစ်ချင်တာကြောင့် မွေ့ယာ ဒီဘက်ခြမ်းမှာ အသာလှဲလျောင်းကာ ကျွန်တော့်ညီဘွားကို အသာဆုပ်ကိုင် လျက် လက်အစုံကို ယိမ်းနွဲ့စေမိပေါ့။ အသံ အနည်းငယ်ထွက်မှုကြောင့်ထင်ရဲ့ သူ့မျက်လုံးတွေဖွင့်လာရင်း ကျွန်တော့်လှုပ်ရှားမှုကို အ သေအချာစိုက်ကြည့်ကာ နွေးထွေး တဲ့သူ့လက်တွေနှင့် ကျွန်တော့်ဘယ်လီကြွက်သားတွေ ရင်အုပ် တွေကို ငြင်သာစွာပွတ်သပ်ပေး တော့တာ။
တဖြည်းဖြည်း မာသထက်မာလာတဲ့ ကျွန်တော့်ညီဘွားကို သူ တက်မက်လာဟန်ဖြင့် စောင်းအိပ်ရာကနေ ထထိုင်ကာ ကွမ်း သီးခေါင်း လေးကို အသာလျှာနဲ့တို့ကြည့်တယ်။ ထိပ်အရေ ပြားလေးကို အသာကလိတယ်။ ထိပ်ပိုင်းလေးကို အကုန်လျှာ ကစားနေပြီးနောက် စုပ်သွင်းလိုက်တာ သူ့သွားတွေဖြင့်ထိမိ တာကြောင့် အနည်းငယ်နာကျင်ရပါရဲ့။ အတွေ့အကြုံမရှိမှု ကြောင့်ဆိုတော့လည်း ရှိတော့ မှာပေါ့။
ခဏနေတော့ သူ့ပါးစပ်ကို ကျယ်ကျယ်ဟကာ ကျွန်တော်လုပ် ပေးခဲ့သလို လှုပ်ရှားပါတော့တယ်။ ကျွန်တော်လည်း တင်ပါး အစုံကို အားပြုကာ သူ့အာခံတွင်းထဲ ၀င်သထက်ဝင်အောင် Rhythm မိမိကြိုးစားရတာပေါ့။ ထွားလှတဲ့ ကျွန်တော့်ပစ္စည်း ဟာသူ့လျှာ၊ သူ့အာ ထဲမှာသာမက သူ့လည်မျိုထဲမှာ ညှပ်နေ ရော။ သူ့လက်အစုံဟာ ကျွန်တော့်ပေါင်တံတွေမှာ အားယူရင်း ပါးစပ်ကတော့ အစုပ်အမှုတ် လုပ်နေတာ သူအထာသိလာဟန် ဖြင့် ကျွမ်းကျင်လာပါ့။ လက်ချောင်းလေးတွေက နို့သီးခေါင်း လေးတွေ၊ ဗိုက်သားတွေကို ပွတ်သပ် ပေးပြန်တော့ ဖီးလ်မြင့်သထက်မြင့်ပေါ့။
ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာရော ကိုယ်ခန္ဓာကပါ Climax ဖြစ်ဖို့ဖြစ် တည်လာချိန်မှာ သူ့ပါးစပ်တွေထဲ ထည့်ဖို့ မလုပ်ချင်တာ ကြောင့် အသာဆွဲ ထုတ်လိုက်ကာ အိပ်ယာပေါ်အသာလှဲရင်း ကိုယ့်ဖာသာလက်ကစားဖြစ်ပါတယ်။ သူက ဒါကိုကြည့်ပြီး သ ဘောတကျပြုံးကာ သူ့လက် တွေဖြင့် လှမ်းကိုင်လိုက်ပြီး ခပ် သွက်သွက်လှုပ်ရှားပေးပါရော။
ကျွန်တော့်စိတ်တွေကို ထိန်းချုပ်မထားတော့ဘူး ရင်ထဲခံစား ရတဲ့ Tempo အတိုင်းပဲ အော်ညည်းလိုက်တယ်။ ပူနွေးတဲ့ သွေး တွေ အားလုံး ဆူပွက် ကုန်ပြီး ရင်တွေတဆတ်ဆတ်တုန်ရင်. ...အား....အ...အ။ အိယ်ယာပေါ် ခြေပစ်လက်ပစ်ပက်လက် လှန်လိုက်တာ ကျွန်တော့် ရင် ဘတ်တွေ ဗိုက်သားတွေပေါ် စိုရွှဲ ကုန်ရပေါ့။ ခုတင်နံဘေးက ဘီရိုပုပေါ်တင်ထားတဲ့ တဘက်တစ် ထည်ကို လှမ်းယူ လိုက်ပြီး ဖယ်ရှားသုတ်သင်ရတာလေ။
နောက်ဆုံးတော့ ဘေးက မျက်တောင်မခတ်စိုက်ကြည့်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ချစ်ရသူဘက် စောင်းလှည့် သူနဲ့ကျွန်တော့်အကြား ကြားလေ သွေးမရအောင် လက်မောင်းအစုံဖြင့်ဖက်၊ ခြေ ထောက်တွေနှင့်ခွကာ ရင်ချင်းအပ်လိုက်ပြါ့ပီ။ နှစ်ဦးသား ဖက်တွယ်ထားမှုထဲမှာ ချစ်ခြင်း တွေ၊ မြတ်နိုးကြင်နာမှုတွေ အပြင် နူးညံ့တဲ့ စိတ်ဝိညာဉ်များ ရောယှက်ကုန်ပြီထင်ပါတယ်။
ယိမ်းနွဲ့နေတဲ့သစ်ပင်တွေ၊ တဖျောင်းဖျောင်းရွာနေတဲ့ မိုးစက် တွေဟာ အိမ်အပြင်မှာ သည်းနေပေမဲ့ အိမ်အတွင်းမှာတော့ တစ်ယောက် လက်မောင်းတစ်ယောက်အုံးကာ နှစ်ဦးသား အတွေးကမ္ဘာထဲရောက်နေကြပြန်ပေါ့လေ။ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လိုစီးမျော ကြမလဲ? တစ်သီးတစ်ခြားစီ နေထိုင်ကြဖို့ အပြင်တစ်ခြားအတွေးများစွာရစ်ဖွဲ့မိကြတာ မထူး ဆန်းဘူးပြောရမလား။ တက်မက်မှုအပြည့်၊ ပြင်းပြတဲ့အနမ်း ချိုမြိန်တဲ့အချိန်တွေ နှစ်ဦးသားရယူပိုင်ဆိုင်ကြတဲ့ခဏတာမှာ...
အတွေးတွေလည်နေတဲ့ ကျွန်တော် သူ့ရဲ့ပါးပြင်ကိုဖျစ်ညှစ် လိုက်မှုကြောင့် လွန့်လူးလာရကာ သူ့မျက်ဝန်းကို စိုက်ကြည့် လိုက်တော့ သူ လည်းပဲနားလည်ပါကြောင်း 'ဘာမှမတွေးနဲ့ ချစ်ရယ် ပျော်ပျော်နေ'ဆိုသည့်သဘောတွေပါဝင်တဲ့ အပြုံး တစ်ပွင့် သူ့နှုတ်ခမ်းမှာခိုတွဲရင်း ကျွန်တော့်လက်မောင်းကို နူးညံ့စွာ အနမ်းပေးတာ ပြည့်စုံလွန်းလှပေစွ။
'ယုံကြည်မှု'တွေရဖို့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောကြတာ ကိုယ့်အ ကြောင်း သူ့အကြောင်း ချစ်ခင်စွာ၊ ရိုးသားစွာဖြင့် လေတိုး သံတွေကို လွှမ်း သွားမလားပါပဲ။
အပြင်မှာ လေမုန်တိုင်းကြောင့် အေးစက်နေပေမဲ့ အတွင်းမှာ စောင်တွေအောက်မှာ ခန္ဓာကိုယ်တွေ ပူးကပ်နေကြရင်း နွေး ထွေး၊ငြိမ်းချမ်း၊ ပျော်ရွှင်စွာဖြင့် နောက်ဆုံးတော့ တစ်ယောက် ကိုတစ်ယောက်ကြည့်ရင်း ပြီးတော့ သူ့ရင်ခွင်ထဲ ကျွန်တော်တိုး ၀င်လိုက်ရင်း နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်ပျော်သွားကြရပါတော့တယ်။
နံရံထက်က ပန်းချီကားကြီးမှာတော့ အာဒံကြီးက ဧ၀ကို ပန်းသီး တစ်လုံးခူးပေးနေတယ်။ အချစ်ဆိုတဲ့ ပန်းသီးက ချိုမြိန်လွန်းလှပေစွ။
Alex Aung (24.3.2010)
စာကြွင်း။ ။ ကိုဝင်းမင်းသစ်က ဒီဝတ္ထုလေးကို မကြာခဏပြန်ဖတ်မိပါတယ် သဘောကျပါတယ်လို့ပြောဖူးတာကို သတိရလို့ပြန်တင် လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။
Posted by Alex Aung at 10:23 PM
ယောက်ျားတွေ မေးတဲ့ဆေး (၃)